ZTE क्वार्ट्ज: Android Wear 2.0 को साथ सस्तो स्मार्टवाच? | Androidsis
ZTE क्वार्ट्ज सस्तो स्मार्टवच एन्ड्रोइड वेयर २.० को साथ हुन सक्दछ
अधिकांश स्मार्टवाचको तुलनामा तपाईले अहिले खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। ZTE क्वार्ट्ज एक धेरै आधुनिक ग्याजेट छ एक आकर्षक डिजाइन संग र आश्चर्यजनक कम मूल्य.
El स्मार्टवाच बजार हालका वर्षहरूमा यो एकदम अनौंठो भएको छ। एकातिर, त्यहाँ यति धेरै विविधता छ कि हामी फेसन विश्वबाट ब्रांडहरू पनि फेला पार्न सक्दछौं जुन यस उत्पादनको भागमा सामेल छन्। अर्कोतर्फ, यी घडिहरू ग्याजेटहरू हुन् सीमित आयु र धेरै बेतुका मूल्यहरू.
यहाँसम्म कि एप्पलले महसुस गरिसक्यो कि स्मार्टवाचको लागि हजारौं डलर माग्नु हालतमा बेवास्ता गरिएको छ कि २ वा years बर्षमा यति ढिलो हुनेछ कि तपाईं यसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
ZTE क्वार्ट्जले गुणवत्ता र मूल्य बीच उत्तम सन्तुलन फेला पारेको छ
स्पष्ट रूपमा ZTE सँग यो बजारको लागि आदर्श विधि छ तपाईंको ZTE क्वार्ट्ज स्मार्टवाचको साथ। यो उपकरण हालका महिनाहरूमा धेरै अफवाह र लीक को नायक थियो।
यो महिनाबाट उपलब्ध छ, ZTE क्वार्ट्ज एन्ड्रोइड वेयर २.० को साथ सस्तो स्मार्टवाच मध्ये एक हो र यसको सुविधाहरू धेरै आशाजनक छन्।
निस्सन्देह, हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा पहिले यसलाई प्रयास गर्न चाहन्छौं, तर विचार गर्दा यसले ल्याउँदछ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन Wear 2100 प्रोसेसर र con १२768MB रैम, यो पक्कै पनि एक धेरै छिटो स्मार्टवाच हुनेछ।
साथै, Android Wear 2.0 रaबाट पनि GB२ जीबी आन्तरिक मेमोरी, ZTE क्वार्ट्जसँग पनि m००mAh ब्याट्री छ, GPS मोड्युल र LTE जडान.
LTE नेटवर्कहरूको लागि समर्थन एक धेरै महत्त्वपूर्ण फिचर हो, किनकि यसले सिघ्रै हेर्नेबाट फोन कल गर्न सजिलो बनाउँदछ, तपाईंको स्मार्टफोनलाई घरमै छोड्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पर्वाह नगरी।
यसको डिजाइनको सन्दर्भमा, ZTE क्वार्ट्ज एक भित्र लुकेको छ १.1.4 इन्च गोलाकार AMOLED प्रदर्शन x०० x p०० पिक्सेलको नेटिभ रिजोलुसनको साथ। साथै, यसको आवरण धातुत्मक हो र पट्टिहरू सजिलै तपाइँको प्राथमिकता अनुसार बदल्न सकिन्छ।
केवल डाउनसाइडहरू घडी को हो मुटुको दर सेन्सरको अभाव र एन्ड्रोइड भुक्तान को लागी NFC मोड्युल।
ZTE क्वार्ट्जको मूल्य $ 199 हुनेछ र अप्रिल १ from देखि किन्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » Smartwatch » ZTE क्वार्ट्ज सस्तो स्मार्टवच एन्ड्रोइड वेयर २.० को साथ हुन सक्दछ
चरा प्रेमीहरूको लागि essential आवश्यक अनुप्रयोगहरू